व्लादिमीर मयाकोभस्की। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। कविता | वर्तमान साहित्य
भ्लादिमीर मयाकोभस्की रूसी २० औं शताब्दीका रूसी कविताहरूको सबैभन्दा असाधारण, विवादास्पद, नवीन र विशेष कविहरू मध्ये एक थिए। उनी आज १ today 1893 in मा बगदादीको जर्जियाली गाउँमा आजको जस्तो जन्म भएको थियो। उहाँलाई पत्ता लगाउन वा सम्झनको लागि यसका केही कविताहरूको संग्रह हो।
1 व्लादिमीर मयाकोभस्की
2 कविताको चयन
2.1 बच्चाको रूपमा
2.3 यो सामान्य रूपमा यस्तो छ
2.4 Verlaine र Cezánne
जब उनका बुबा २० औं शताब्दीको शुरुमा मरे, मयाकोभस्की उनको परिवारमा सरे मास्कोजहाँ उनले राजनीतिमा समर्पण गर्न अध्ययन छोडे।
यसको अतिरिक्त कवि, यो पनि एक महान थियो चित्रकार र अभिनेता सिनेमा यो जस्तो चम्कियो निबन्धकार र आफ्ना पाठहरूमा उनले सँधै आफ्नो क्रान्तिकारी आदर्शको अपमान र रक्षा गरे। ठूलो प्रेम, र पनि असम्भव, उनको जीवनको थियो लिली ब्रिक, जसलाई उनले आफ्नो सबैभन्दा प्रसिद्ध काम समर्पित गरे। उनले फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा पनि गरे जसले उनको कवितामा ठूलो प्रभाव पारे। तर पराजय र परित्याग को भावना को शिकार, १ 1930 .० मा आत्महत्या गर्नुभयो.
म प्रेममा सद्गुण थिए, कुनै सीमा थिएन।
तर बच्चाको रूपमा,
चिन्तित मानिसहरू, काम गरे।
रियन नदीको किनारमा भागे,
र केहि गरिरहेको छैन।
मेरी आमा रिसाए:
मेरो बुबाले मलाई बेल्टको साथ धम्की दिनुभयो।
मैले तीन झूटा रूबल कमाए
र तिनीहरूले पर्खाल मुनि सैनिकहरू संग खेल्थे।
शर्टको वजन बिना,
बुटि ofको तौल बिना
र म कुटासको घाममा जलाइदिए,
तिनीहरूले मेरो मुटु टाके सम्म
सूर्य चकित भयो:
«तपाईले मुश्किलले देख्न सक्नुहुन्छ
उसको पनि मुटु छ
केटाले जिद्दी गर्यो।
कसरी यो एक टुक्रा मा फिट हुन्छ
र किलोमिटर चुचुराहरू??
युवाहरूको एक हजार पेसा छ।
हामी व्याकरणको अध्ययन गर्छौं जबसम्म हामी स्तब्ध हुँदैनौं।
उनीहरूले मलाई पाँचौं वर्षमा लात हाले
र म मॉस्कोको जेलहरूमा कीराले खाएको थियो।
हाम्रो सानो घर संसारमा
सुंगुर कपालयुक्त कविहरू ओछ्यानका लागि देखा पर्दछ।
यी एनीमिक गीतहरूलाई के थाहा छ?
उनीहरूले मलाई जेलमा माया गर्न सिकाए।
यो तुलना गर्न यो के लायक छ
बोलोनको जंगलको उदासी?
एक समुद्र परिदृश्य अघि लामो लामो उदास?
म क्यामेरा विन्डो १०103 को साथमा प्रेम गर्छु,
"उपक्रमकर्ताको कार्यालय" बाट।
त्यहाँ मानिसहरू छन् जो हरेक दिन घाममा हेर्छन्
र गर्व छ।
"उनीहरूको किरणको मूल्य छैन," उनीहरू भन्छन्।
अलिकति पहेलो सनबीमका लागि,
मेरो भित्तामा प्रतिबिम्बित,
म संसारमा सबै दिन्छु।
यो सामान्य रूपमा यस्तो छ
प्रेम कसैलाई दिईन्छ
पैसा र यस्तै,
यसले मुटुको सबसोइललाई कठोर बनाउँछ।
हृदयमा हामी शरीर बोक्छौं,
तर यो थोरै छ।
मुट्ठी ह्याण्डल गर्नुहोस्
र छाती मा स्टार्च संग यो कभर।
जब उनीहरू बुढो हुन्छन् तिनीहरूलाई यो पश्चाताप छ।
महिलाले श्रृंगार गरिन।
मानिस मउलर प्रणालीको साथ व्यायाम गर्दछ,
तर धेरै ढिलो भयो
छालाले यसको रिink्कहरू गुणा गर्दछ।
र त्यसपछि यसको पातहरू पखाल्दछ।
Verlaine र Cezánne
म दुर्घटनावश, हरेक पटक,
टेबल वा शेल्फ को किनारा संग,
मेरो पाइलाहरु संग मापन, हरेक दिन,
मेरो कोठाको चार मिटर।
यो सबै इस्ट्रिया होटेलको बारेमा मेरो लागि साँघुरो छ,
यस कुनामा, क्याम्पेन-प्रीमियर सडक।
पेरिसको जीवनले मलाई दमन गर्दछ।
यो हाम्रो लागि होइन।
दाँयामा, मसँग बोउलेभर्ड मोन्टपर्नेस् छ,
बाँयामा, बोउलेभर्ड रसल।
म तलसम्म नडरीकन हिंड्दछु,
म दिन र रात हिंड्छु
एक मानक कवि जस्तै,
मेरो आँखा अगाडी सम्म,
भूतहरू उदय हुन्छन्। (…)
पेटको मुनि पानीको पानाहरू।
सेता दाँतले छालहरूमा फ्याँकियो।
यो फायरप्लेसको विलाप थियो - मानौं तिनीहरू हिड्दै थिए
प्रेम र तामा फायरप्लेस को लागी वासना।
डु boats्गा क्रिब्सको बाहिर निस्किए
फलामको आमा चूस्न।
बहिरा जहाजहरूको कानमा
लंगरको झुम्का जल्दै थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कविता » व्लादिमीर मयाकोभस्की। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। कविताहरु
जोसे एन्जल भलेन्टे। उनको मृत्युको वार्षिकी। कविताहरु